mairie-antananarivo – Didimpoitra Faobe
auteur 13 jona 2017 Commentaires fermés
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany Talata 13 jona 2017 ny didimpoitra faobe tamin’ity taona 2017 ity, izay fanaon’ ny Kaomina Antananarivo Renivohitra isan-taona ary mifarana ny volana jolay izao. Natomboka teto amin’ny Boriboritany faha efatra ny hetsika, izay tetsy amin’ny CSB II Namontana. Ankizy miisa 200 no nisoratra anarana ho atao didimpoitra eto amin’ny boriboritany faha-efatra ary 70 no vita androany, tsy maintsy atao fizahàna ny ankizy izay vao tapahana ary mbola mitohy ny hetsika eny Boriboritany faha efatra.
Ny tompon’andraikitra eto amin’ny Boriboritany faha-efatra dia mankasitraka tanteraka ireo olona malala tanana amin’ny fanampiana ny fiarahamiasa nahatonga izao hetsika izao ohatra amin’izany ny Gastro Pizza, Farmasia Toky Andrefana Ambohijanahary, ny Colis Express…. Tsy nohadinoina koa ireo mpiara-miasan’ ny kaominina rehetra sy ny Solombavambahoaka Felix RANDRIAMANDIMBISOA.
Ny tanjona amin’ny fanaovana didimpoitra faobe araka ny nambaran’ny Lefitra voalohany ny ben’ny tanana Ramboasalama Emilien dia ho fanamaivanana ny fahasahiran’ny mponina eto Antananarivo Renivohitra ary marihana fa tafiditra ao anatin’ny politika sosialin’ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA rahateo izany.
Mbola mitohy eny amin’ny boriboritany 5 hafa ny hetsika fa tsy mijanona eto amin’ny boriboritany faha-efatra fotsiny ary ankizy 200 isaky ny boriboritany no ezahana atao amin’ity taona ity.Misy koa ireo Malabary sy kilalao izay zaraina kaominina Antananarivo Renivohitra ho an’ireo ankizy tsirairay vita didimpoitra.
Isaky ny Talata no anaovana ny didimpoitra faobe eny amin’ny boriboritany voalohany sy faharoa ary fahatelo. Isaky ny zoma kosa no anovana ny faha-efatra sy faha-dimy ary faha-enina. Marihana fa samy manana ny toerana fanaovana izany izy ireo ka ho an’ny boriboritany faha-dimy sy faha-telo dia ao amin’ny CSBII Andravoahangy, ny boriboritany faha-efatra ao amin’ny CSB II Namontana, ny Boriboritany faha-enina eny an-toerana ihany araka ny nambaran’ny Talen’ny fahasalamana eto Antananarivo Renivohitra HERIVONONA Durand Derys.